कान्छा लाल तामाङ्ग
हाल - ताजि ईराक
सायद यस्तो प्रश्न नर्गने मान्छे नेपालमा कमै भेटिन्छन होला किनकी, देश अहिले यस्तो अबस्थामा पुगेकोछ । जहाँ ८/१० जना जम्मा भयो कि त एउटा भुमिगत पार्टी खोलि हाल्छन । के त्यसो त नेपालको राजनितिले सहिमार्ग कहिल्यै नअपनाउलन त अबस्य त्यस्तो हुदैन एक न एक दिन त सहि मार्गमा आउनेछ भन्दै हामी दिन गन्दै बसौ । मलाई यस प्रंसंगमा एउटा कथाको याद आयो…
हामीलाई थाहा छ संसारमा धनि अनि गरिब दुबै थरीका मानिसहरु बस्छन् । मलाई माफ गर्नुहोला यदि यो कथाले कसैको जिवनमा आँच पुग्न गएमा ।
एक दिन आमा र छोरा संगै बसेर आफ्नो घरको सदस्यलाई पर्खिरहेको थिए । परिवारको सदस्य अरु कोही नभई आफ्नो श्रीमान यानेकि छोराको बुबा थियो । आफ्नो श्रीमान घरमा नभएको बेला त्यो नारीले आफ्नो छोरालाई यसो भन्दै सम्झाउथीन: “छोरा अहिले त हामी गरिब छौ तर एक दिन हामी पनि धनि हुने छौ अनि हामी पनि हाम्रो मनले चहेको गर्नेछौ” । त्यो कुरा छोराले मनमा लिई रहेको थियो । जब उस्को बल्याकाल बित्यो अनि जबान भयो, अझै उस्लाई आफ्नो आमाले भनेको कुरा दिमाग बाट हटेको छैन । उ मेहेनेत गर्दै छ र दिन बिताई रहेको छ । उस्ले बिवाह पनि गरे अनि उस्को नानि पनि भयो । तर सुखको सासे फेर्ने दिन भने आएको थिएन त्यस्तैमा आफ्नो आमा र बुबा पनि उस्ले गुमाउनु पर्‍यो। अझै पनि उस्को सुखको दिन भने अएनन् । अब उस्ले पनि आफ्नो छोरालाई त्यसै भन्न थाले छोरा अहिले त हामी गरीब छौ तर एक दिन हामी पनि धनिहुने छौ । एउटै कुरा याहाँ दोहोरी रहेको छ त्यो हो एक दिन हामी पनि धनि हुन्छौ तर दुई पुस्ता सम्म पनि उनिहरुले सुखको सास फेर्न पाएनन् अनि उनिहरुको धनि बन्ने सपना सपनामनै रहिरह्यो ।
हो त्यस्तै हाम्रो देशको राजनिति पनि त…॥ हुने होईन जबकी एउटा बर्ष गयो अव त राजनितिले सहि मार्ग लिन्छ होला नि भन्दा भन्दै कयौ पुस्ता त बित्ने होइन किन उठछन् त यस्तै खालको प्रश्न नेपालीहरुको दिमागमा। यस्को सजिलो उत्तर छ राजनितिले सहि मार्ग नलिनु । दश बर्षे जनयुद्ध गरेर सत्तामा रहेको माओवादीले पनि राजनितिलाई सहि दिशा दिन सकेनन् …।सकोस पनि कसरी जबकी अलि कति अर्का पार्टीले प्रेसर दिने बितिकै हामी फेरी बन्दक उठाउछौ भन्नेले । नेपाली जन्ताले माओवादीलाई भोट त्यतिकै दिएको हाईनन् किनकी दश बर्षे युद्ध काललाई हेरेर दिएका हुन तर स्वईच्छाले भने दिएका होइनन् भन्ने कुरा प्रधान मन्त्रीको शब्द बाट नै प्रस्ट हुन्छ । किनकी माओवादी पार्टीले अझै पनि सबैलाई धम्क्याएर अगाडी बड्न सक्छ भन्ने सोच बाट ग्रसित छन त्यसैले त सत्तामा बसेर पनि अझै जनतालाई धम्क्याउन छडेका छैनन् ।
नेपाली जनताले राणा शासन हेर्‍यो, पान्चायत ब्यवस्या पनि हेर्‍यो, बहुदल ब्यबस्था पनि हेरिसक्यो अबको ब्यबस्था जन्ताले हेर्न बाँकी छ । नेपाली जनताको चहाना अनुरुप दुई सय चालिस बर्ष पुरानो शाहा बंशिय सासनलाई तोडदै अहिले नेपालमा गणतन्त्रको उदयामान भसैके छ । त्यसैले अब जनता लाटो छैन, कुनै पनि पार्टीले अब पनि जन्ता लाई धम्क्यएर नै पार्टीको ईच्छा पुरा गर्छु भन्ने सोचेको छ भने अब त्यो सपना नदेख्दा नै भलो हुन्छ ।
हाल सम्मा नेपाली जन्ताले नेपाली कंग्रेसको सरकार हेर्‍यो, नेकपा एमाले को नौ महिने सरकार पनि हेर्‍यो, र अब माओवादीको सरकार पनि हेर्दै छन । त्यति मात्र नभै बिहारीहरुलाइ नेपाली नगरिता प्रदान गरेको कारणले अहिले अएर यिनै ब्यक्तिहरुले नेपालको तराईमा आगो बालि रहेको छ । त्यो बलेको आगोलाई कहिले पनि निभ्न दिएका छैनन् । एउटा भुमिगत पार्टी बल्ल बल्ल वार्तामा आउछन फेरी अर्को भुमिगत पार्टी जनमाउछन् । के यस्तै हो भने नेपालको राजनितिले सहि मार्ग लिन सकिन्छ त अहिले त नेपालमा एउट लहर नै अएको छ त्यो हो पार्टी खोल्ने अनि भुमिगत बस्ने र जन्तालाई धम्क्याउने, अपहरण गर्ने भनेको कुरा नपाए हत्या गर्ने ।
हाम्रो आखा अगाडी जन्तालाई शान्ति सुरक्षा दिन्छु भनि सत्तामा बसेका माओवादी सरकारले यस्तो कि्रयाकलाप लाई किन रोक्न सक्दैनन् त रोक्न सकोस पनि कसरी किनकी उनिहरु पनि त त्यसरी नै आएका हुन नि । यहा नेकपा माओवादी मात्र होईनन् अरु पार्टीहरु पनि छन जुन पार्टीले सरकारलाई प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरिरहेका छन् । उनिहरुले पनि किन सोच्दैनन् सोच्ने बेला पनि कसरी पाओस एक अपासमा कुसिकोलागि खिचतानि गर्दैमा ठिकका छन् । नेपाली कंग्रेस भनेको पद पाएन भनेर सत्तामा नै गएनन् । त्यतिमात्र नभई अब फोरमका नेताले पनि सोच्नु पर्ने हो । अझै पनि फोरम ले एक प्रदेश एक मधेश भन्ने एजेन्डा छोडेका छैनन् । के पाउछन् यनिहरुले त्यो एक प्रदेश एक मधेश बनाएर कतै तराई जतिलाई एक प्रदेश एक मधेश बनाए पछि दोश्रो बिहार त हुने हाईन त्यसैले हामी आम नेपालीको जन-चाहान भनेको शान्ति र सुरक्षा हो । त्यो शान्ति र सुरक्षा तब सम्म हुदैन जब सम्म नेपालमा राजनितिले सहिमार्ग लिदैन । त्यसैले हे राजनितिक दल हो! आफ्नो स्वर्थ पूर्तिको लागि मात्र सत्तामा नबसि जनताको लागि काम गर्न सत्तामा जाउ र नेपालको राजनितिलाई सहिमार्गमा ल्याउ । आम नेपालीको जनचाहान माथि उल्लेखित कथा जस्तो नहोस् एक दिन त राजनितिले सहि मार्ग लिन्छ भन्दै कयौ पुस्ता नजाओस । त्यसको लागि अहिले नै सम्पुर्ण राजनितिक दलहरुले सोचौ र सम्पुण नेपालीको जन-चाहनालाई सम्मान गर्दै नेपाली राजनितिलाई सहि मार्ग दिलाउ ।
खै ! भनेर खुइय सुस्केरा फेर्नु पर्ने स्थिती बनाइ दिनु भो हाम्रा राम्रा नेताजी हरुले --